व्हाट्सएपको लागि स्टिकर कसरी बनाउने | क्रिएटिभ अनलाइन
हामीले एप्लिकेसनहरूमा आएका स्टिकरहरूको लागि बसोबास गर्नुपर्दैन, यद्यपि तिनीहरू धेरै थिए, धेरै पटक तिनीहरूमा साथीहरू र परिवारसँग आफूलाई व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति वा तरिकाहरूको अभाव थियो। यस कारणका लागि, कुनै पनि अनुप्रयोगमा प्रयोग गर्न थप इमोटिकन्स र रमाइलो अनुमति दिने एपहरू देखा परे। तर, पर्सनलाइज्ड आइपुग्यो र यस अर्थमा, धेरैले व्हाट्सएपका लागि स्टिकरहरू कसरी बनाउने भनेर खोजिरहेका छन्, किनकि यो एउटा एप हो जसमा हामीले तिनीहरूलाई सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्छौं। तपाईलाई यो कसरी गर्ने थाहा छ?
त्यसोभए हामी तपाईंलाई दिन्छौं व्हाट्सएपको लागि आफ्नै स्टिकरहरू सिर्जना गर्न तपाईंले चाल्नु पर्ने कदमहरू र तपाईंको डिजाइनहरू सिर्जना गर्दै दिउँसोको आनन्द लिनुहोस्।
1 व्हाट्सएपका लागि स्टिकरहरू बनाउनका लागि तपाईंले पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू
2 स्टिकर निर्माताको साथ व्हाट्सएप स्टिकरहरू बनाउनुहोस्
3 स्टिकर बनाउन अन्य एपहरू
3.3 शीर्ष स्टिकर स्टिकर निर्माता
4 एपहरू प्रयोग नगरी व्हाट्सएपको लागि स्टिकरहरू कसरी बनाउने
व्हाट्सएपका लागि स्टिकरहरू बनाउनका लागि तपाईंले पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू
यद्यपि व्हाट्सएपका लागि स्टिकरहरू बनाउन गाह्रो छैन, सत्य यो हो त्यहाँ धेरै आवश्यकताहरू छन् जुन तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुन पूरा गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, सुरु गर्न पनि ।
यी एन्ड्रोइड र आईओएस दुबैमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, र तिनीहरूले अरूलाई पनि तिनीहरूको आनन्द लिन अनुमति दिन्छ।
तर के के आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ? हामी बारेमा कुरा गर्छौं:
पारदर्शी पृष्ठभूमि। यो महत्त्वपूर्ण छ कि सबै स्टिकरहरू पारदर्शी पृष्ठभूमिमा बनाइएका छन्।
केहि सटीक आयामहरू। विशेष गरी, 512x512px। यसको मतलब यो हो कि मोबाइलका छविहरू जुन सामान्यतया हामीले प्रयोग गर्न चाहन्छौं, हामीलाई सेवा गर्दैन किनभने तिनीहरू धेरै ठूला हुन्छन्। के यसको मतलब हामीले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं? त्यो पनि होइन, तर छवि अपलोड गरेर यसलाई आकार बनाउन पर्याप्त हुनेछ।
एक सटीक आकार। यो 100KB भन्दा कम हुनुपर्छ। अर्को शब्दमा, तपाईंले हेर्नु पर्छ कि छविको तौल सकेसम्म कम छ।
यसमा एक हुनुपर्छ स्टिकरको प्रत्येक छेउमा १६ पिक्सेल मार्जिन। यदि तपाईंले धेरै मार्जिन छोड्नुभयो भने छवि सानो देखिन्छ र यदि तपाईं यसलाई माथि जानुहुन्छ भने यो देखिने छैन।
स्टिकर निर्माताको साथ व्हाट्सएप स्टिकरहरू बनाउनुहोस्
स्रोत: फोन हाउस ब्लग
हामी तपाइँलाई व्हाट्सएप प्रयोग गरेर तपाइँको स्टिकरहरू कसरी बनाउने भनेर सिकाउनेछौं स्टिकर निर्माता, एउटा अनुप्रयोग जुन प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ (तर यो एक मात्र होइन)। यसका लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्छ ।
जब तपाईंसँग यो हुन्छ, र यसलाई खोल्नुहोस्, यसले तपाईंलाई स्टिकरहरूको नयाँ प्याक सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ। हो, तपाइँ एकै पटक धेरै गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाइँको धेरै समय बचत गर्नेछ। यो गर्नको लागि, तपाईंले + चिन्ह दिनुपर्छ र प्याकेजको साथसाथै यसलाई सिर्जना गर्ने लेखकको नाम पनि दिनुपर्छ। तपाईंले सिर्जना गर्नुहोस् क्लिक गर्नु पर्ने ठीक पछि र 30 स्टिकरहरू सहितको छवि देखा पर्नेछ, जुन तपाईंलाई एकै पटक सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। अवश्य पनि, तपाइँ अधिकतम 30 सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, तर न्यूनतम 1 हो।
अब तपाईले मात्र गर्नु पर्छ आफ्नो मोबाइल ग्यालेरीबाट आयात गर्नुहोस्, वा क्यामेराको साथ फोटो खिच्नुहोस्। तपाईंसँग फाइदा यो छ कि तपाईंले आफ्नो रुचिको फोटोको अंश प्राप्त गर्न चाहनुभएको भाग काट्न सक्नुहुन्छ।
एकचोटि तपाईंसँग कटआउट भएपछि, अर्को वैकल्पिक चरण भनेको पाठ, रङ, इमोजीहरू, आदि थपेर फोटोहरू सम्पादन गर्नु हो। स्टिकरको सिर्जना समाप्त गर्नु अघि। एकचोटि तपाईंसँग सबै कुरा भयो, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको "Add to WhatsApp" बटनमा क्लिक गर्नु हो र तिनीहरू स्वचालित रूपमा आयात हुनेछन्।
अवश्य पनि, यो महत्त्वपूर्ण छ एकचोटि तपाईंले समाप्त गरेपछि एप नमेट्नुहोस् किनभने, यदि तपाईंले गर्नुभयो भने, तपाईंले यससँग सिर्जना गर्नुभएका सबै स्टिकरहरू गायब हुनेछन्।
राम्रो कुरा यो हो कि तपाईले चाहानु भएको धेरै स्टिकर प्याकहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाइँ तिनीहरूलाई आफ्नो कुराकानीमा स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
स्टिकर बनाउन अन्य एपहरू
यद्यपि स्टिकर मेकर सबै भन्दा राम्रो ज्ञात छ र सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएको छ, सत्य यो हो कि यो एक मात्र होइन जसको साथ तपाईं आफ्नो फोटो वा इन्टरनेटबाट छविहरु संग आफ्नो अभिव्यक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ। वास्तवमा, तपाईंसँग प्रयोग गर्नका लागि थप विकल्पहरू छन् र यसले तपाईंलाई अरू केही दिन सक्छ जुन यो अघिल्लोले गर्दैन। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि तिनीहरू के हुन्?
यो व्हाट्सएपको लागि स्टिकरहरू सिर्जना गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो ज्ञात मध्ये एक हो। यो नि: शुल्क छ, जस्तै हामीले पहिले उल्लेख गरेका छौं, तर पाठ फन्टहरूको पुस्तकालयको लागि अघिल्लो भन्दा फरक छ।
अन्य शब्दहरूमा, तपाईंसँग फन्टहरूको धेरै विविधता हुनेछ, यदि तपाईं पाठ थप्न चाहनुहुन्छ भने, जसले तपाईंलाई यो एप रोज्न सक्छ। थप रूपमा, यसले अन्य स्टिकरहरूमा प्रयोग गर्नका लागि तपाईंले बनाउनु भएको कटौतीहरू बचत गर्ने सम्भावना छ। उदाहरण को लागी, धेरै संग कोलाज को एक प्रकार को सिर्जना।
साथै नि: शुल्क, यो अघिल्लो भन्दा बाहिर खडा छ व्हाट्सएपमा प्रयोग गर्नको लागि तपाईले आफ्नै स्टिकरहरू मात्र बनाउन सक्नुहुने छैन तर तपाईले तिनीहरूलाई एप्लिकेसनमा साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ र एकै समयमा, अरूलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि प्रयोग गर्नका लागि सिर्जनाकर्ताहरू।
यो एक प्रकारको स्टिकर प्याक बैंक बन्छ जहाँ तपाइँ वास्तविक खजाना पाउन सक्नुहुन्छ।
शीर्ष स्टिकर स्टिकर निर्माता
यस अवस्थामा यसले अघिल्लोको जस्तै कार्य गर्दछ, जहाँ तपाइँसँग ए मेम्स र स्टिकरहरूको राम्रो आधार जुन तपाईंले डाउनलोड र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं पनि आफ्नो सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
अवश्य पनि, यो iOS को लागी मात्र उपलब्ध छ।
भुक्तान गरिएको, तर कार्यको लागि हड्ताल यो जस्तै छ फोटोहरूबाट पृष्ठभूमि सजिलै हटाउनुहोस्, क्रप नगरी, तर यसले स्वचालित रूपमा र उत्कृष्ट सम्भावित परिणामको साथ गर्छ।
राम्रो कुरा यो हो कि तपाइँ अन्य स्टिकरहरू आयात गर्न सक्नुहुन्छ वा तिनीहरूलाई Google ड्राइभमा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
एपहरू प्रयोग नगरी व्हाट्सएपको लागि स्टिकरहरू कसरी बनाउने
के तपाई त्यस्ता मध्ये एक हुनुहुन्छ जसलाई मोबाइलसँग धेरै राम्रोसँग काम गर्न मिल्दैन? सायद ती मध्ये एक जो मोबाइल फोनको सट्टा कम्प्युटर प्रयोग गर्न रुचाउँछन्? वा आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेसन र एप्लिकेसनहरू राख्न नचाहनेहरूको? ठीक छ, हुनसक्छ र यो तपाईंलाई रुचि छ।
र यो तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट्सएपको साथ सीधा आफ्नो स्टिकरहरू सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको मा जानु हो वेब संस्करण, यसलाई तपाइँको ब्राउजरमा खोल्नुहोस् र तपाइँको रचनात्मकता खोल्नुहोस्.
र, जब तपाइँ यसलाई खोल्नुहुन्छ, तपाइँलाई थाहा छ कि यो बाहिर निस्कन्छ जस्तो कि तपाइँ तपाइँको मोबाइलमा हुनुहुन्छ, केवल ठूलो। यदि तपाईंले कुनै पनि कुराकानीमा क्लिक गर्नुभयो र इमोजी आइकनमा थिच्नुभयो भने, र त्यहाँबाट स्टिकरहरूमा, सबैभन्दा सामान्यहरू देखा पर्नेछ तर, तिनीहरूको छेउमा, सिर्जना बटन पनि। तपाईंले यसलाई दिने बित्तिकै, एउटा स्क्रिन खुल्नेछ जसमा तपाईंले यसको स्टिकर सिर्जना गर्न कुन छविमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेर बताउनुपर्छ।
सत्य यो हो कि यो धेरै सजिलो छ किनभने तपाईं पाठ थप्न सक्नुहुन्छ, यसलाई काट्न सक्नुहुन्छ, थप स्टिकरहरू राख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई रंग्न सक्नुहुन्छ र काट्न र काट्न सक्नुहुन्छ। एक पटक काम समाप्त भएपछि, सेतो तीर हान्दा पठाउनेछ। र के तपाईलाई लाग्दैन कि तपाईसँग यो छैन? ठिक छ, तपाईं गलत हुनुहुन्छ, किनकि यो बचत हुनेछ, चाहे तपाईंसँग एन्ड्रोइड वा आईओएस मोबाइल छ।
अब तपाईले देख्नुहुन्छ कि व्हाट्सएपका लागि स्टिकरहरू बनाउन कत्ति सजिलो छ, तपाईले मात्र काम गर्नुपर्दछ। के तपाईंले कहिल्यै गर्नुभएको छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » WhatsApp को लागी स्टिकर कसरी बनाउने